Ukudibanisa i-Metal kunye ne-Brazing kunye neNkqubo yeTekhnoloji yeWelding
Zininzi iindlela ezikhoyo zokudibanisa isinyithi, kubandakanya i-welding, i-brazing kunye ne-soldering. Nguwuphi umahluko phakathi kwentsimbi kunye nokuhombisa? Uthini umahluko phakathi kokubhrasha kunye ne-soldering? Makhe sihlolisise umahluko kunye neenzuzo zokuthelekisa kunye nokusetyenziswa okuqhelekileyo. Le ngxoxo iya kukhulisa ukuqonda kwakho kokujoyina isinyithi kwaye ikuncede uchonge eyona ndlela ifanelekileyo yesicelo sakho.
INDLELA ESEBENZA NGAYO IBRAZING
A ngokudibeneyo Yenziwe ngendlela eyahlukileyo ngokupheleleyo kwilungu elidityanisiweyo. Umahluko wokuqala omkhulu kubushushu - ibhrashi ayinyibilikisi isiseko sesinyithi. Oku kuthetha ukuba amaqondo obushushu e-brazing ahlala ephantsi kunendawo yokunyibilika kwesiseko sesinyithi. Amaqondo obushushu aseBrazil nawo asezantsi kakhulu kunamaqondo obushushu ewelding kwizinyithi ezifanayo, kusetyenziswa amandla amancinci.
Ukuba ibhondi ayifaki isiseko sesinyithi, ingabajoyina njani? Isebenza ngokwenza indibaniselwano yentsimbi phakathi kwensimbi yokugcwalisa kunye nemiphezulu yeesinyithi ezimbini ezidityanisiweyo. Umgaqo apho isinyithi sokugcwalisa sitsalwa ngokudibeneyo ukwenza esi sibophelelo sisenzo se-capillary. Xa usebenza ngobhedu, ufaka ubushushu ngokubanzi kwiziseko zesinyithi. Isinyithi sokugcwalisa emva koko sidibene neendawo ezishushu. Iyanyibilika kwangoko bubushushu kwiziseko zesinyithi kwaye zitsalwe yintshukumo ye-capillary ngokupheleleyo ngokudibeneyo. Yile ndlela eyenziwe ngayo idibanisi edibeneyo.
Izicelo zeBrazil zibandakanya i-elektroniki / umbane, i-aerospace, imoto, i-HVAC / R, ulwakhiwo nokunye. Imizekelo isusela kwiinkqubo zokupholisa umoya ezimotweni ukuya kwiijet ye-jet ye-jet ethe-ethe ukuya kwizinto ze-satellite kwizinto zobucwebe. IBrazing ibonelela ngoncedo olubonakalayo kwizicelo ezifuna ukujoyina izinyithi ezingafaniyo, kubandakanya ubhedu kunye nentsimbi kunye nezinto ezingezizo zesinyithi ezifana ne-tungsten carbide, i-alumina, i-graphite kunye nedayimane.
Izibonelelo zokuthelekisa. Okokuqala, ilunga elidityanisiweyo lilunga eliqinileyo. Umdibaniso odityaniswe ngobhedu (njengesihlanganisi esidityanisiweyo) uya kusoloko womelele okanye womelele kunesinyithi esidityanisiweyo. Okwesibini, indibaniselwano yenziwa kumaqondo obushushu asezantsi kakhulu, ukusukela malunga ne-1150 ° F ukuya kwi-1600 ° F (620 ° C ukuya kwi-870 ° C).
Eyona nto ibaluleke kakhulu, isiseko sesinyithi asikaze sinyibilike. Kuba isiseko sesinyithi asinyibiliki, banokugcina uninzi lweempawu zabo ezibonakalayo. Isiseko sokunyaniseka kwesinyithi luphawu lwawo onke amalungu adibeneyo, kubandakanya omabini amacandelo amancinci kunye namacandelo atyebileyo. Kwakhona, ubushushu obusezantsi bunciphisa ingozi yokugqwetha kwesinyithi okanye ukujijisana. Cinga kwakhona, ukuba amaqondo obushushu asezantsi afuna ubushushu obuncinci- into ebalulekileyo yokonga iindleko.
Olunye uncedo olubalulekileyo lokubhrasha kukukhululeka kokujoyina isinyithi esingafaniyo usebenzisa iialloys ezi-flux-cored / coated alloys. Ukuba awunyanzelekanga ukuba unyibilikise isiseko sesinyithi ukuze uzijoyine, ayinamsebenzi nokuba banendawo ezahlukeneyo zokunyibilika. Unokubamba isinyithi kubhedu ngokulula nje ngentsimbi. I-Welding libali elahlukileyo kuba kuya kufuneka unyibilikise isiseko sesinyithi ukuze ubadibanise. Oku kuthetha ukuba ukuba uzama ukujija ubhedu (indawo yokunyibilika 1981 ° F / 1083 ° C) kwisinyithi (indawo yokunyibilika 2500 ° F / 1370 ° C), kuya kufuneka usebenzise ubuchwephesha obunobunkunkqele obuduru. Ukukhululeka kokujoyina izinyithi ezingafaniyo ngokusebenzisa iinkqubo eziqhelekileyo zokukhangela kuthetha ukuba unokukhetha naziphi na izinyithi ezifanelekileyo ekusebenzeni kwendibano, usazi ukuba awuyi kuba nangxaki yokuzibandakanya nokuba ziyahluka kangakanani kubushushu obunyibilikayo.
Kwakhona, a ngokudibeneyo inembonakalo egudileyo, ethandekayo. Kukho ukuthelekiswa kobusuku nemini phakathi kwencindi encinci, ecocekileyo yelunga elidityanisiweyo kunye nebala elingqindililiyo elingaqhelekanga lomdibaniso odibeneyo. Olu phawu lubaluleke ngokukodwa kumalungu kwiimveliso zabathengi, apho ukubonakala kubalulekile. Umdibaniso odityanisiweyo unokuhlala usetyenziswa “njengoko unjalo,” ngaphandle kokugqitywa kwemisebenzi efunekayo- enye indleko yokonga.
IBrazing ibonelela ngolunye uncedo olubalulekileyo ngaphezulu kwewelding kuba abaqhubi banokufumana izakhono zobhedu ngokukhawuleza kunezakhono zokuwelda. Isizathu sikumahluko okhoyo phakathi kwezi nkqubo zimbini. Umdibaniso odibeneyo odibeneyo kufuneka ulandelwe ngokungqamanisa ngokuchanekileyo kwesicelo sobushushu kunye nokubekwa kwesinyithi sokugcwalisa. Umdibaniso odityanisiweyo, kwelinye icala, uthanda "ukuzenza ngokwawo" ngokusebenzisa isenzo se-capillary. Ngapha koko, isahlulo esibonakalayo sobuchule obuchaphazelekayo ekubhangiseni sisekwe kuyilo nakubunjineli bendibaniselwano. Isantya sokuthelekisa uqeqesho lwabasebenzi abanezakhono yinto ebalulekileyo yexabiso.
Gqi beleni, Ubhedu lwesinyithi Kulula ukuzenzekelayo. Iimpawu zenkqubo yobhedu-usetyenziso olubanzi lobushushu kunye nokulula kokufakwa kwesinyithi- kunceda ekupheliseni ukubakho kweengxaki. Zininzi iindlela zokufudumeza ukudibanisa ngokuzenzekelayo, iindlela ezininzi zentsimbi yokufaka ifreyimu kunye neendlela ezininzi zokuzifaka ukuze umsebenzi wobhedu uzenzele ngokulula kuwo onke amanqanaba emveliso.
INDLELA ESEBENZA NGAYO I-WELDING
I-Welding ijoyina isinyithi ngokunyibilika kunye nokuyixuba kunye, ngesiqhelo ngokudityaniswa kwesinyithi sokugcwalisa isinyithi. Amalungu aveliswayo omelele- esiqhelo omelele njengokuba isinyithi sihlangene, okanye somelele. Ukufakela isinyithi, ufaka ubushushu obugxile ngqo kwindawo edibeneyo. Obu bushushu mabube bobushushu obuphezulu ukunyibilikisa isinyithi (isinyithi esidityanisiweyo) kunye nesinyithi sokugcwalisa. Ke ngoko, amaqondo obushushu ewelding aqala kwinqanaba lokunyibilika kwesiseko sesinyithi.
I-Welding ngokubanzi ilungele ukujoyina iindibano ezinkulu apho omabini amacandelo esinyithi athe ubukhulu (0.5 "/12.7mm) kwaye ajoyina kwindawo enye. Kuba ibhondi yelunga edityanisiweyo ayiqhelekanga, ayiqhelekanga kwimveliso efuna amalunga nezithambiso. Izicelo zibandakanya uthutho, ulwakhiwo, iivenkile zokulungisa nokulungisa. Imizekelo yindibano yeerobhothi kunye nokwenziwa kweenqanawa zoxinzelelo, iibhlorho, izakhiwo zezakhiwo, iinqwelomoya, oololiwe bakaloliwe kunye neendlela, imibhobho nokunye.
Izibonelelo zokuthelekisa. Ngenxa yokuba ubushushu bewelding bukhulu, buqhelekile ukuba busebenze ngaphakathi kwaye bukhonjwe; akunakwenzeka ukuyifaka ngokufanayo kwindawo ebanzi. Le nto ichongiweyo inezibonelelo zayo. Umzekelo, ukuba ufuna ukudibanisa imicu emibini yentsimbi kwindawo enye, indlela yokumelana nombane iyasebenza. Le yindlela ekhawulezayo, neyoqoqosho yokwenza amalungu aqine, asisigxina ngamakhulu amawaka.
Ukuba indibaniselwano ilayini kunokuba ichazwe, nangona kunjalo, kuvela iingxaki. Ubushushu basekhaya be-welding bunokuba bububi. Umzekelo, ukuba ufuna ukujija iintsimbi ezimbini, uqala ngokwenza imiphetho yeentsimbi ukuvumela igumbi lesinyithi sokugcwalisa isinyithi. Emva koko uwelda, uqala ukufudumeza isiphelo sendawo edibeneyo ukuya kubushushu obunyibilikileyo, emva koko ucofe ubushushu ecaleni komgca odibeneyo, ubeke ukufakelwa kwesinyithi kulungelelwaniso nobushushu. Le yinto eqhelekileyo, yokusebenza kwe-welding. Yenziwe kakuhle, le ndawo idityanisiweyo iwelding ubuncinci yomelele njengokuhlangana kwesinyithi.
Nangona kunjalo, kukho iziphene kule ndlela yokudibanisa kunye nokudibanisa. Amalungu ayenziwa kumaqondo obushushu aphezulu-aphezulu ngokwaneleyo ukuba anganyibilika zombini iziseko zesinyithi kunye nentsimbi yokugcwalisa. La maqondo obushushu aphezulu anokubangela iingxaki, kubandakanya ukuphambuka okunokwenzeka kunye nokujijisana kwesiseko sesinyithi okanye uxinzelelo olujikeleze indawo ye-weld. Obu bungozi buncinci xa isinyithi esidityanisiweyo sijiyile, kodwa zinokuba yingxaki xa iziseko zesinyithi zingamacandelo amancinci. Kwakhona, amaqondo obushushu aphezulu ayabiza, kuba ubushushu ngamandla kunye neendleko zamandla. Okukhona ubushushu kufuneka ubenze ngokudibeneyo, kokudibanisa kuya kuba neendleko zokuvelisa.
Ngoku, qaphela inkqubo welding oluzenzekelayo. Kwenzeka ntoni xa ungjoyinanga indibano enye, kodwa amakhulu okanye amawaka endibano? I-Welding, ngohlobo lwayo, izisa iingxaki kwi-automation. Umdibaniso we-weld-weld odibeneyo owenziwe kwinqanaba elinye kulula ukuba uzenzele. Nangona kunjalo, nje ukuba inqaku libe ngumgca-umdibaniso womgca-kwakhona, umgca kufuneka ulandelwe. Kuyenzeka ukuba wenze lo msebenzi wokulandela umkhondo, uhambise umgca odibeneyo, umzekelo, ukudlula isikhululo sokufudumeza kunye nokondla ucingo lokugcwalisa ngokuzenzekelayo kwiipropu ezinkulu. Olu luseto oluntsonkothileyo noluchanekileyo, nangona kunjalo, luqinisekiswe kuphela xa unemveliso enkulu yokubaleka kwamalungu afanayo.
Gcina ukhumbula ukuba iindlela zokuwelda zihlala ziphucula. Unokuwelda kwimveliso ngesiseko se-elektroni, ukukhutshwa kwe-capacitor, ukukhuhlana kunye nezinye iindlela. Ezi nkqubo zintsonkothileyo zihlala zifuna izixhobo ezizodwa nezixabisa kakhulu kunye nokuseta, ukuchitha ixesha kuseto. Cinga ukuba ziyasebenza na kwimveliso emifutshane ebalekayo, utshintsho kulungiselelo lwendibano okanye kwimihla ngemihla intsimbi yokujoyina iimfuno.
Ukukhetha Inkqubo yokujoyina i-Metal elungileyo
Ukuba ufuna amajoyini asisigxina kwaye omelele, uya kunciphisa isinyithi sakho ngokujoyina ukuthathela ingqalelo ukuwelda kuthelekiswa ukugquma. I-Welding kunye ne-brazing zombini zisebenzisa ubushushu kunye nokuzalisa isinyithi. Zombini zinokwenziwa kwimveliso. Nangona kunjalo, ukufana kuphelela apho. Basebenza ngokwahlukeneyo, ke khumbula oku kuqwalaselwa kwe-welding vs welding:
Ukutyeba kwamacandelo esinyithi esiseko
I-Spot okanye umgca wokudibanisa iimfuno
Ubungakanani bendibano yokugqibela iyafuneka
Olunye ukhetho? Amalungu adityaniswe ngoomatshini (afakwe imisonto, agxunyekwe okanye abethelelwe) ngokubanzi awuthelekisi amalungu adibeneyo ngamandla, ukuxhathisa ukothuka kunye nokushukuma, okanye ukuqina kokuvuza. Ukuncamathela kokuncamatheliswa kunye nokufakwa ngeteksi kuya kubonelela ngebhondi esisigxina, kodwa ngokubanzi, kwaye akunakunikezela ukomelela kwendibaniselwano enobhedu-elinganayo okanye enkulu kunaleyo yesiseko. Kananjalo abanakho, njengomthetho, ukuvelisa amalungu adibanisa ukumelana namaqondo obushushu angaphezu kwe-200 ° F (93 ° C). Xa ufuna isigxina, amalunga esinyithi esinyithi ukuya kwisinyithi, ukuhombisa kukomelela kakhulu.
iindidi Teknoloji tags ukugquma, ngokudibeneyo, Umsebenzi wobhedu, njani ukuwelda umsebenzi, isinyithi sobhedu, induction ngokudibanisa isinyithi, ukudibanisa ukudibanisa, iwelding yokudibanisa, Ubhedu lwesinyithi, isinyithi sobhedu, Ukunyanzeliswa kwesinyithi, iintsimbi welding, i-heater yesinyithi, welding Post yokukhangela